गएको २ वर्षमा मैले जति फिल्म गर्छु भनेको थिएँ त्यो गरेँ,अब मेरो स्टामिनाले धान्दैन: दयाहाङ राई — Harpraharnews.com
गएको २ वर्षमा मैले जति फिल्म गर्छु भनेको थिएँ त्यो गरेँ,अब मेरो स्टामिनाले धान्दैन: दयाहाङ राई
३ श्रावण २०७५, बिहीबार July 19, 2018 हरप्रहर न्युज
खाइलाग्दो जीउडाल, चकलेटी अनुहार, लामो कपाल, स्टाइलिष्ट पहिरन ! नेपाली फिल्मी हिरो हुन चाहिने यो बलिउड ट्रेडमार्क तोडेका अभिनेता हुन् दयाहाङ राई ।
‘लुट’ मा ‘गोफ्ले’ चरित्रले उनलाई फिल्मको हिरोको रुपमा चिनायो । नेपाली फिल्ममा आर्यन सिग्देल, जीवन लुईटेल, निखिल उप्रेती जस्ता अभिनेताहरु निर्विकल्प हुँदै गर्दा नेपाली समाजकै पात्रहरूको कथामा एकपछि अर्को फिल्म आउन थाल्दा दया सर्वाधिक ‘डिमाण्डेड’ बन्न पुगे ।
गएको २ वर्षसम्म उनले पछाडि नहेरी एकपछि अर्को फिल्म गरे । कति बक्सअफिसमा पत्तासाफ भए त कतिले निर्मातालाई उकासे पनि । तर, उनले आफ्नो स्टारडमलाई जोगाइराख्न सकेनन् । जति चाँडोे उनले स्टारडम कमाए उतिनै चाँडो गुमाए पनि ।
एक समय दयाहाङ राईका फिल्म भनेपछि हलको काउन्टरमा दर्शकको भीड ठेलामठेल हुन्थ्यो । अचेल तिनै दर्शक उनका फिल्मको पोस्टर देख्नासाथ नाक खुम्च्याउन थालेको छन् । डिमाण्ड चर्को रहँदा जस्तासुकै फिल्म गर्नुले उनको क्रेज अहिले लथालिङ्ग भएको छ । यो कुरा उनी स्वयमले पनि बुझेका छन् ।
गएको २ वर्षमा उनले नेपाली मार्केटका लागि प्रसस्तै फिल्म दिए र आफ्नो बैंक ब्यालेन्स पनि बलियो बनाए । ‘पैसामुखी’ भएको आरोप खेपिरहँदा गएको ५/६ महिनादेखि भने दयाले ‘ब्याक टू ब्याक’ फिल्म गर्न छाडेका छन् । फिल्मबाट अफर नै आउन त छाडेको होइन ? सिनेवृतमा चर्चा यस्तो पनि छ ।
के कारण थियो जसले ‘ब्याक टू ब्याक’ फिल्म गर्न बाँध्य भए उनी ? साउन ४ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘भैरे’ को प्रचारमा व्यस्त अभिनेता दयाहाङ राईले यस विषयमा खुलेरै आफ्नो विचार राखेको छन् ।
उनी भन्छन्- ‘गएको २ वर्षमा मैले जति फिल्म गर्छु भनेको थिएँ त्यो गरेँ किनभने मलाई अनुभव पनि बटुल्नु थियो । मैले धेरै मेकर्सहरुसँग काम गर्नु थियो । मेरो एउटा साथी-सर्कल थियो, त्यो साथी-सर्कलको फिल्म पनि गर्दै आएँ ।’
‘निश्चल बस्नेत, रामबाबु गुरुङ, दीपेन्द्र लामा, दीपक रौनियार मेरा संगतिहरु हुन् ।’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुको आ-आफ्नै फिल्म मेकिङको शैली छ । त्यो पनि बुझ्दै गएँ ।’
‘मलाई नयाँ र अनुभवी मेकर्ससँग पनि काम गर्ने रहर थियो, जुन मैले २ वर्षको अवधिमा गरेँ । निगम श्रेष्ठ, आकाश अधिकारी, उज्जवल घिमिरे, एभरेष्ट सूर्य बोहरा लगायत धेरै नयाँ तथा पुराना मेकर्ससँग काम गरेँ किनभने मलाई अनुभव चाहिएको थियो’- उनले भने ।
आफूले बुझेको फिल्म ठिक छ वा छैन ? भन्ने बुझ्न र आफूलाई करेक्सन गर्न पनि गएको २ वर्षमा संख्यात्मक हिसाबले धेरै फिल्म गरेको उनको भनाई छ । उनी गएको ५/६ महिनादेखि भने फिल्मको संख्यामा कटौती रहेको बताउँछन् ।
उनी अगाडि भन्छन्- ‘मलाई थाहा भयो कि अब मेरो स्टामिनाले धान्दैन । मसँग जुन अभिनय क्षमता छ त्यो ह्रास भएर गइसक्यो । मलाई लिएर कमर्शियल फिल्म बनाउन चाहनुहुन्छ भने ठिक छ नभए गहन विषयका फिल्म गर्न अब म टाइम लिन्छु ।’
‘ब्याक टू ब्याक’ फिल्म गर्ने कलाकारलाई यहाँ ‘राजेश हमालको सिक्वेल’ भन्ने गरिन्छ । यो आरोपबाट दयाहाङ पनि मुक्त छैनन् । तर, उनी यो कुरालाई सजह रुपमा लिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा कलाकारलाई सुध्रिनका लागि आरोप आउनु राम्रो हो । म यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु ।’
‘पण्डित बाजेको लौरी’ का वितरक र ‘चक्कर’ का निर्माता बीच हातपात
डा. केसीका समर्थकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग, अस्पतालमा पसेर अश्रुग्यास र अन्धाधुन्द लाठी प्रहार